'यौनको प्रभावबाट रचनालाई अल्गाएर राख्न सक्दिनँ'
‘यौनको प्रभावबाट रचनालाई अल्गाएर राख्न सक्दिनँ’
केही रहस्य, केही आश्चर्य र जिज्ञासाले भरिपूर्ण साहित्यकार पारिजातको जीवन आफैंमा अध्ययनको विषय हो । उनी जीवनभर अविवाहित नै रहिन् तर, उनको रचनामा प्रेम, यौन र विवाहबारे खुला र स्पष्ट धारणाहरु भेटिन्छन् । ‘साहित्य सामाजिक सन्दर्भमा आमजनता अथवा शोषित वर्गका निम्ति लेखिन्छ’ भन्ने धारणा राख्ने पारिजातले प्रेम, यौन र विवाहमा केन्द्रित रहेर दिएको अन्तर्वार्ताका केही अंशहरु यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । यो सामग्री हामीले निर्माण प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पारिजातका संकलित रचनाहरु, ग्रन्थ-६ बाट लिएका हौं ।
साहित्यमा वैंशालु प्रेमको स्थान कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ ?
महिला-पुरुष सम्बन्धबारे नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा समेत उठ्ने गरेका विवादबारे केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
यौन सम्बन्धलाई लिएर जटिलभन्दा जटिल सामाजिक व्यवस्थालाई पार गरेर बल्लबल्ल यहाँ आइपुगेका छौं । एकनिष्ठता भनेको एउटा छाप मात्रै हो, लाइसेन्स भन्ने त केही छैन । प्रेम विवाह होस् वा जस्तोसुकै विवाह होस्, अर्कोसँग प्रेम हुन्छ भने प्रेममा त्योसँग यौन सम्पर्क राखेर अथवा उसलाई स्वास्नी बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म विरुद्धमा छु ।
एकनिष्ठ विवाह हुनुपर्‍यो, छाडापन हुन भएन भन्नेबारे त विवाद भएन । तर यदाकदा अन्यथा घटना भए भने तिनैलाई आवश्यक भन्दा बढी गिजोल्याएर ‘राजनीतिक हतियार’ बनाउनु अलि बेठीक जस्तो लाग्दैन ?
त्यो त हुन्छ । तर कमसेकम मार्क्सवादलाई मानेर आउनेहरू प्रतिबद्ध भइदिनु पर्‍यो एकनिष्ठतातर्फ । जेठीलाई छोडेर कान्छी ल्याउने, अनि कान्छी छँदाछँदै अर्कोसँग लाग्ने ! उत्तरदायी व्यक्तिहरूले, जानेबुझेकाहरूले, ठूला ठूला पदमा बसेकाहरूले त्यसो गरिँदिँदाखेरि समाजमा भाँडभैलो त मचिन्छ मचिन्छ नि !
विच्छेद गर्न त पाउनु पर्छ नि ! तर दुवैथरी राजिखुसी हुनुपर्‍यो ।
मानौं, दुईटा मध्ये एउटा गलत नै रहेछ भने त दुइटैलाई ‘राजीखुसी’ गराउने कुरो कसरी व्यवहारिक होला र ?
‘डिभोर्स’ गरेर बसे हुन्छ नि ! लोग्नेमान्छे बदमाशै रहेछ भने त्यसलाई ‘डिभोर्स’ गरेर हटाइदिन्छु भन्ने स्वाभिमान त स्वास्नीमान्छेमा हुनुपर्‍यो ।
पुरुष नै छन् । तपाईंले कतै सुन्नुभा’ छ कि स्वास्नीमान्छेले एउटा लोग्नेमान्छेलाई बलात्कार गर्‍यो भन्ने कुरा ?
साहित्यलाई यथार्थवादी बनाउनु छ भने यौनको अभिव्यक्ति हुनु कुनै संक्रामक रोग हो झैं मलाई लाग्दैन । यौनबिनाको महान साहित्य रच्न सकिन्छ र रचिएका पनि छन् । तर ‘यौन-यौनकै लागि’ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ राखेर कुनै पनि लेखकले लेख्न चाहिँ अलि हुँदैन झैं मलाई पनि लाग्दछ । अर्को कुरा, जहाँसम्म मेरो रचनामा बढ्ता यौनको प्रभाव देखापर्दछ भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा मलाई यही भन्नु छ कि– हो ! म पनि यौनको प्रभावबाट आफ्नो रचनालाई अल्गाएर राख्न सक्दिनँ, तर मेरो लेखाइको मूल दृष्टिकोण चाहिँ पाठकलाई बढ्ता यौनप्रति आकार्षित पारेर, तिनीहरूलाई विकृत तुल्याएर छोडिदिन चाहिँ होइन । म उदाहरणको लागि तपाईंको समक्ष एक दुई कथाहरूलाई ल्याउँछु । पहिले प्रेमा शाहको कथालाई नै लिनुहोस् । ‘पहेंलो गुलाब’ मा के यौनको गन्ध आउँदैन र ? म भन्छु प्रशस्त छ । तर पनि कथाकारले कतै यौनलाई प्रतिनिधित्व गरेको थाहा पाइँदैन । अरू कैयौं समस्याहरूको सँगसँगै यौन पनि आएको छ । त्यस कथामा अभिव्यक्तिको जुन मिठास छ, शैलीको जुन ज्यान छ, र कलाको जुन पराकाष्ठा छ, त्यसले यौनलाई छोडिदिएको छ । एउटा सफल कलाकारमा सेक्सप्रति हुनुपर्ने गुण यही नै हो, जुन प्रेमामा देखा परेको छ । म अझ पनि भन्छु- साहित्यमा अश्लीलता हुनुहुन्न । कलाले त्यसलाई छोपदिएको हुनुपर्दछ । मुख्य कुरा के भन्देखि यौनलाई प्रधानता दिए पनि महानता चाहिँ मैले दिएकी छैन । यौनलाई नै साहित्यमा आधार बनाएर लेखिएको अरूको रचनाहरूलाई पनि प्रधानता दिन चाहन्नँ । जस्तै, ‘मैंया साहेबको डायरी’, ‘मेरी सीता जस्ती निरजा’ यस्तै खालका अरू कैयौं कथाहरू त्यति हिन भएर चाहिँ लेख्न हुन्न झैं लाग्दछ । त्यो त लेखकमा यौनप्रति देखापरेको विकृति मात्रै हो, त्यो लेखकको हिनता मात्रै हो, कुनै खुबी चाहिँ होइन । अर्कोतिर आर्थिक समस्या पनि त्यत्तिकै जटील रूपमा देखा परेको छ । अविकसित अफ्रिका, एशिया र लेटिन अमेरिकाका जनता आफ्नो निर्धनता, गरीबी, अशिक्षा, रोग, भोक आदिसँग लड्नमा लागेका छन् भने त्यहाँ यौनको स्थान रहँदारहँदै पनि त्यो त्यत्ति प्रमुख रूपमा रहेको हुन्न । जति उनीहरूलाई बाह्य भौतिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूले पिरोली राखेको हुन्छ, चिन्तित तुल्याइराखेको हुन्छ । यी देखापरेका सबै वस्तुहरूबाट पनि लेखकहरू आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैनन् भने अर्कोतिर ती देशका सबै लेखकहरूले यसै विषयमा मात्रै लेख्नुपर्दछ भन्ने पनि मेरो विचार होइन । कुनै पनि लेखक कुनै पनि विषयमा मात्रै लेख्न पूर्णतः स्वतन्त्र छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकालाई नै लिउँ । मलाई लाग्छ आज त्यहाँ आर्थिक समस्या उति जटिल रूपमा छैन । जुन समस्याले आजको अमेरिकी जीवन संकटग्रस्त छ, त्यो हो- यौनको समस्या किनकि आजकाल त्यहाँ मानिसहरूको ‘इन्डिभ्यूजल मोरेल’ मा आइराखेको संकटले नै यो कुरालाई प्रष्ट गर्दछ । सुव्यवस्था र सुसम्पन्नता आउनासाथै यौन समस्याको वास्तविकता लोप हुन्छ भन्न गाह्रो छ । यो सधैं जटील नै रहन्छ ।
प्रेम मानव मात्रमा हुने एउटा सार्वभौम अनुभूति हो । त्यसो त प्रेम अरू प्राणी जातिमा छैन भन्ने होइन । बाघ बघिनी जस्ता खुंखार र एकलकाँटे प्राणी पनि वर्षको एक पल्ट उनीहरूको मेटिङ डेजमा आठ नौ दिनसम्म नारिएर सँगै घुमेको देख्न पाइन्छ । मान्छे जातमा त यो प्रेम बाह्रैकाल छ । प्रेमलाई लिएर समाज परिवर्तन प्रक्रियाको भित्री स्वरूप अझै संघर्षरत नै छ र मान्छेको सचेतनता पनि विकासतर्फ नै छ । तथापि, आजसम्म प्रेममा एकनिष्ठता आइसकेको छैन । परिणामस्वरूप, यौन पनि एकनिष्ठ भएको छैन । यौन एकनिष्ठ हुन सक्छ, यो ठोकुवा गर्न सकिँदैन । कारण, यौन मान्छेको निम्ति भोक, तिर्खा र निद्रा जस्तै अनिवार्य हुन्छ । आपसमा प्रेम भावना भएपछि यौन सम्बन्ध हुनु, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर यौन सम्बन्धमा प्रेम हुनै पर्छ भन्ने कुनै जरूरी छैन । यौन सम्पर्क मान्छेले मौका हेरेर जोसुकैसँग जहाँकही पनि राख्न सक्छन् तर प्रेमको रूप यति सहज छैन । समाजवादतर्फ संक्रमण भएको समाज बाहेक अरू देशहरूमा रहेको वेश्यावृत्तिको व्यापक कारोबारको पनि यौन र मान्छेको सम्बन्ध कस्तो छ, स्पष्ट पार्छ । यस यौन सम्बन्धले गर्दा पुरुष हैकमवाला समाजमा वेश्यावृत्ति जस्तो, पुरुषलाई क्षणिक शारीरिक सुख दिएर थकित हुने पेशा गर्नु महिलाप्रति अपमानजनक र शोषणपूर्ण नीति हो । वात्सल्यले गर्दा नारीमा कामुकता कम हुन्छ, र पनि नारीले चाहेमा उनीहरूलाई यो सुविधा छैन । अमेरिकामा र युरोपका केही देशहरूमा पुरुषहरू वेश्यावृत्ति गर्छन्, जसलाई मेल प्रोस्टिच्यूट भनिन्छ । मेरो भनाइ महिलाले यौन तृप्तिको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने होइन । वेश्यावृत्तिको क्रमशः उन्मूलन भई समाज शिष्ट र सौम्य स्थितितिर प्रवृत्त होस्- यही चाहन्छु ।
साहित्यले समाजलाई सुधारको बाटोमा लैजान्छः पूर्वप्रम खनाल
नेपाली भाषामा आयो डोरबहादुर विष्टको ‘भाग्यवाद र विकास’
अमृत देखाउँदै …
देश, वागमती प्रदेश, साहित्य
पहाडीले ल्याए ‘जगत्मुखी जीवनमुखी सेवामुखी जिजीविषा’
दर्जनौं चर्चित गीतका सर्जक तथा संगीतकार गुरुङको निधन
के छैन रामपुरमा…
स्वरसम्राट नारायण गोपालको २९ औं स्मृति दिवस मनाइदै
न्याय बेच्ने वकिल भेटिन्छन्
‘रुञ्चे कमरेड र चालू पत्रकारका कुरा’
सिस्नुपानी नेपालको देउसी भैलोमा प्रश्न- तान्दाखेरि लहरा, अरु कति होलान् महरा ?
देवकोटाको १११ औँ जयन्ती: साहित्यकार र पत्रकार सम्मानित
आज महाकवि देवकोटाको जन्मजयन्ती